Xildhibaannada baarlamanka oo dalab cusub oo dhib badan hor-dhigay CCC |
Xildhibaannada baarlamanka oo dalab cusub oo dhib badan hor-dhigay CCC
Muqdisho (Somalimedia.co.uk) – Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya oo qaarkood galabta kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho, ayaa waxay Ra’iisal Wasaaraha kaga diggeen in Golaha Wasiirada cusub, uu ka soo dhex xusho Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya.
Gaba gabadii kulankaan, ayaa waxaa Saxaafadda la hadashay Xildhibaanad Khadra Axmed Ibraahim, iyadoo marka hore soo dhaweysay go’aankii ay Xildhibaanada Baarlamaanka ku taageereen soo jeedintii Ra’iisal Wasaaraha, ee ahayd in dib u eegis uu ku samayn doono Golahiisa Wasiirada amaba uu kala diri doono.
“Ra’iisal Wasaaraha waxaan ugu baaqeynaa inuusan Golaha Wasiirada ka keenin Xildhibaanada Baarlamaanka. Waayo Xildhibaanada iyagoo laba garab isku khilaafsan, oo is heysta.” Ayay tiri Marwo Khadka Axmed Ibraaim.
“Waxaan ugu baaqeynaa in banaanada uu ka keeno Golaha Wasiirada. Haka soo xusho aqoonyahanada aan siyaasadda shaqada ku lahayn ee dalka joogga.” Ayay tiri Xildhibaanadda ka tirsan Baarlamaanka Somaliya.
“Golaha Wasiirada inuu ka soo xulo ayaa wanaagsan aqoonyahanada dalka gudahiisa wax ku baratay, ee aan ku jirin siyaasadda iyo Xildhibaanada Baarlamaanka midna.” Ayay tiri Marwo Khadra.
“Haddii kale buuqa iyo fowdada ka taagan Baarlamaanka weligeed ma dhammaan doonto. Si waxaas oo dhan aysan u soo noqon waa inuusan Golaha Wasiirada ka keenin Xildhibaanada.” Ayay sii raacisay Khadra.
Dad badan, ayaa waxay qabaan aragtida ah inaan Golaha Wasiirada cusub lagu soo darin xubnaha ku jira Xarunta Golaha Shacabka, si ay u soo afjarmato kacdoonka siyaasadeed ee ka imaanayaa Baarlamaanka.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa waxaa lagu wadaa in dib uu ugu laabto soo magacaabidda Golaha Wasiirada, si uu taageero kaga kasbado Xarunta Golaha Shacabka.